Inkqubo yoLawulo lwe-COVID-19 iphehlelelwe yiNkulumbuso yeeNkonzo zeLebhu yezoNyango ukuphendula igunya lokugonya iBiden
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Cofa apha ukuba le ngxelo yakho! » Inkqubo yoLawulo lwe-COVID-19 iphehlelelwe yiNkulumbuso yeeNkonzo zeLebhu yezoNyango ukuphendula igunya lokugonya iBiden
INkulumbuso yeLebhu yeeNkonzo zeLabhoratri (PMLS), ibhengeza namhlanje ukusungulwa kwenkqubo yolawulo lwe-COVID-19, i-Keep America Thriving, eyilelwe ukunceda imibutho emikhulu ngokuthobela ngokufanelekileyo kwi-Biden Administration Vaccine Mandate. Iindaba ze-NBC zixele ukuba inokugqitywa kwangoko kule veki. Umsebenzi wezoKhuseleko noLawulo lwezeMpilo (OSHA) ebesebenza ekuphuhliseni umgangatho okhawulezileyo wexeshana oquka abaqeshi ngabasebenzi abali-100 nangaphezulu ukuqinisekisa ukuba abasebenzi babo bagonyiwe ngokupheleleyo okanye bayavavanywa veki nganye, latsho iSebe lezabaSebenzi.
INkulumbuso yeLebhu yeeNkonzo zeLabhoratri (PMLS), ibhengeza namhlanje ukusungulwa kwenkqubo yolawulo lwe-COVID-19, i-Keep America Thriving, eyilelwe ukunceda imibutho emikhulu ngokuthobela ngokufanelekileyo kwi-Biden Administration Vaccine Mandate. Iindaba ze-NBC uxele ukuba inokugqitywa kwangoko kule veki. Umsebenzi wezoKhuseleko noLawulo lwezeMpilo (OSHA) ebesebenza ekuphuhliseni umgangatho okhawulezileyo wexeshana oquka abaqeshi ngabasebenzi abali-100 nangaphezulu ukuqinisekisa ukuba abasebenzi babo bagonyiwe ngokupheleleyo okanye bayavavanywa veki nganye, latsho iSebe lezabaSebenzi.
Iimfuno zikaMongameli ziya kusebenza kumashishini angaphezu kwe-130,000 e-US kwaye iya kuchaphazela malunga nezigidi ezingama-80 zabasebenzi kwilizwe liphela. Nangona kunjalo, uninzi lwabantu baseMelika lusathandabuza malunga nezitofu zokugonya, igunya kulindeleke ukuba libeke uxinzelelo olukhulu kwiziseko zophando zesizwe ezibangelwa yimfuno eyandileyo yovavanyo lwe-COVID-19. Ukuthathela ingqalelo oku, i-PMLS ilungiselelwe enye yezona ndawo zinkulu zovavanyo esizweni nasekhaya ukuvelisa izinto zovavanyo olungenamda.
"Xa ezinye iilabhoratri ziye zabuya umva ngexesha lokuzola kumatyala ehlotyeni ngenxa yokwehla kwemfuno zovavanyo, khange sikwenze oko," utshilo uKevin Murdock, iCEO noMsunguli we-PMLS. “Siqhubeke nokwakha amandla ethu njengelabhoratri ukulungiselela olunye unyango olufana nolu sijongene nalo ngoku. Ngesi sizathu, sikulungele ukuphatha ngaphezulu kakhulu kweelebhu ezininzi kwilizwe liphela. ”
Ukuhambahamba ngokuzenzekelayo kwe-PMLS ngezixhobo zelebhu zobugcisa kubenze bakwazi ukuqhuba ukuya kuvavanyo lwe-300,000 lwe-COVID ngosuku nge-98% yeziphumo ezibonelelwe ngaphantsi kweeyure ezingama-24. Iqela labo lezenzululwazi ze-PhD ezikhokelayo zibe negalelo kwimpendulo yesizwe ye-COVID-19. Ngenxa yoku, i-PMLS liqabane lokuvavanywa elithembekileyo kumaqela ezemidlalo oqeqesho, izikolo kunye neekholeji, iinkampani ezinkulu, kunye namasebe ezempilo kurhulumente kulo lonke ilizwe.
Ngeziseko zophuhliso ezikhoyo, inkqubo ye-PMLS ye-Keep America Thriving yenzelwe ngokukodwa iinkampani zokuvelisa, ukuhambisa kunye nokuzalisekisa amaziko, ukuthengisa okuthengisa izinto ezinkulu, ulwakhiwo, kunye nemibutho enemisebenzi emikhulu, ese-ofisini. Gcina iMelika ikhula ibonelela ngezi zinto zilandelayo:
Inkqubo yokujika eyenziwe ngokwezifiso yokuvavanywa konikezelo oluqhubekayo lweekiti zovavanyo lweziphumo ezikhawulezayo nezichanekileyo
Uqeqesho lwasendaweni kunye nokubonisana ngeendlela ezifanelekileyo zokuvavanya kunye nesicwangciso esiliqili seyona ndlela yokuvavanya
Uvavanyo olukhawulezileyo lweantigen
Uvavanyo lwePCR olunokuthi lugcinwe kwindawo